Soomaaliya, 21 October 2018
Axad 21 October 2018
Dawlada Itoobiya iyo ONLF ayaa maanta magaalada Asmara ee dalka Iritariya ku kala saxiixday heshiis dhawr qodob ah.
Waqtiga Doorashada Gollaha Wakiilada Soomaaliland oo Shaki ku Jiro
Doorashooyinka golayaasha wakiillada iyo deegaanka Somaliland oo hore loo qoondeeyay inay qabsoomaan bisha saddexaad ee sannadka dambe, ayaa madmadow soo galay suurto-gelnimadooda.
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha waxaa todobaadkan marti ku ah madaxweynaha Gobolka Soomaalida ee Itoobiya, Mustafe Muxumad Cumar.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlmaanka Soomaaliya Md. Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa ka hadlay dadaallada ay ku doonayeen inay ku soo afjaraan khilaafaadka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar.
Garoowe: Ciidamo ka Gadooday Mushahar La'aan
Ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa saakay gadood ciidan ka sameeyay magaalada Garowe, iyagoo ka cabanaya mushaarkoodii oo ka maqan muddo billo ah.
shirkad Ceymis oo Laga Furay Hargeysa
Munaasibad si rasmi ah loogu daahfurayay shirkadda caymiska ee Geeska Afrika ayaa maanta lagu qabtay Hargeysa, iyagoo masuuliyiinta dawladda ee u xilsaarani ay sheegeen in ay dhawaan samayn doonaan sharciyadii caymiska.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa qubanayaal kala duwan oo ka hadlaya arrimaha ka dhacay dalka Somalia, toddobaadkii inna dhaafay, waxaana soo jeedinaya wariye Jamaal Axmed Cusmaan
Sahra Khaliif oo VOA u warrantay
Sahra Khaliif oo dhawaan loo doortay in ay xubin ka noqoto golaha Deegaanka ee magaalo ku taalla dalka Biljim ayaa VOA u warrantay
Warar dheeraad ah oo ka soo kordhay duqayn ka dhacday barrtmaha Somalia todobaadkan ayaa sheegaya in ciidamadada Maraykanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda ee Somalia ay duqeyntaa ku dileen 60 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab.